February 2018 - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
​ကြော်​ငြာ Page တွေ Like ထားရင် အခြားသူရဲ့ New Feeds မှာ ကိုယ့်နာမည် မတွေ့အောင်လုပ်နည်း
🇲🇲 မင်္ဂလာပါ 🇲🇲 ••• လူမှု့ကွန်ယက် ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာ Ads Page တွေနှင့် အခြားသော Page တွေ Like လုပ်ထားရင် ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ New Feed...
​ကြော်​ငြာ Page တွေ Like ထားရင် အခြားသူရဲ့ New Feeds မှာ ကိုယ့်နာမည် မတွေ့အောင်လုပ်နည်း Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 8:46 PM Rating:5🇲🇲 မင်္ဂလာပါ 🇲🇲 ••• လူမှု့ကွန်ယက် ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာ Ads Page တွေနှင့် အခြားသော Page တွေ Like လုပ်ထားရင် ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ New Feed...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 8:46 PM No comments:
အနီးအနားက WiFi ရဲ့ Password ကို Auto ဖော်ပြပေးမယ့် - WiFi Map — Free Passwords & Hotspots APK
မင်္ဂလာပါ ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်လေးကတော့ ကိုယ်နေတဲ့ ကိုယ့်အနီးအနားက WiFi ရဲ့ Password ကို Auto ဖော်ပြပေးမယ့် 2018-02-15 နေ့ထွက် Update ဗားရှင်းအသစ်...
အနီးအနားက WiFi ရဲ့ Password ကို Auto ဖော်ပြပေးမယ့် - WiFi Map — Free Passwords & Hotspots APK Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 8:16 PM Rating:5မင်္ဂလာပါ ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်လေးကတော့ ကိုယ်နေတဲ့ ကိုယ့်အနီးအနားက WiFi ရဲ့ Password ကို Auto ဖော်ပြပေးမယ့် 2018-02-15 နေ့ထွက် Update ဗားရှင်းအသစ်...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 8:16 PM No comments:
မိမိဖုန်းကနေ တခြားဖုန်း ၆ လုံးကို Remote control ပုံစံ အသုံးပြုပြီး ထိန်းချုပ်လို့ရနိုင်မယ့် - TimeAway Apk
မိမိ ဖုန်းကနေ တခြား တခြားဖုန်း ၆ လုံးကိုRemote control ပုံစံ အသုံးပြုပြီး ထိန်းချုပ်လို့. ရစေနိုင်မယ့်ဆော့ဖ်ဝဲလေးပါဒီ App ကတော့ မိဘ တေ...
မိမိဖုန်းကနေ တခြားဖုန်း ၆ လုံးကို Remote control ပုံစံ အသုံးပြုပြီး ထိန်းချုပ်လို့ရနိုင်မယ့် - TimeAway Apk Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 8:03 PM Rating:5မိမိ ဖုန်းကနေ တခြား တခြားဖုန်း ၆ လုံးကိုRemote control ပုံစံ အသုံးပြုပြီး ထိန်းချုပ်လို့. ရစေနိုင်မယ့်ဆော့ဖ်ဝဲလေးပါဒီ App ကတော့ မိဘ တေ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 8:03 PM No comments:
Website နှင့် Blog တွေထဲကိုဝင်တဲ့အခါ အခြား Browser တွေထက်100% ပိုမြန်စွာဝင်ရောက်ပြီး ကြော်ငြာတွေကိုဖျောက်ထားပေးမယ့် - v12.0.0.1088 UC Browser - Fast Download Private & Secure APK
မင်္ဂလာပါ။ UC Browser - Fast Download Private & Secure ဆော့ဖ်ဝဲလ် 2018-02-27 ရက်နေ့ထွက် Update ဗားရှင်းအသစ်လေးပါ။ဒီ UC Browser Versio...
Website နှင့် Blog တွေထဲကိုဝင်တဲ့အခါ အခြား Browser တွေထက်100% ပိုမြန်စွာဝင်ရောက်ပြီး ကြော်ငြာတွေကိုဖျောက်ထားပေးမယ့် - v12.0.0.1088 UC Browser - Fast Download Private & Secure APK Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 6:21 PM Rating:5မင်္ဂလာပါ။ UC Browser - Fast Download Private & Secure ဆော့ဖ်ဝဲလ် 2018-02-27 ရက်နေ့ထွက် Update ဗားရှင်းအသစ်လေးပါ။ဒီ UC Browser Versio...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 6:21 PM No comments:
ဖုန်းဖြင့် ကာရာအိုကေသီချင်းဆိုပြီး အသံတွေပါဖမ်းယူချင်တဲ့သူတွေအတွက် - v5.3.3 Sing! by Smule Apk
မင်္ဂလာပါ Android,Android OS,Tablet ကိုင်ဆောင်ကာ ဖုန်းဖြင့် ကာရာအိုကေသီချင်းဆိုပြီး အသံတွေပါ ဖမ်းယူချင်တဲ့သူတွေအတွက် Sing! by Smule Apk 20...
ဖုန်းဖြင့် ကာရာအိုကေသီချင်းဆိုပြီး အသံတွေပါဖမ်းယူချင်တဲ့သူတွေအတွက် - v5.3.3 Sing! by Smule Apk Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 5:50 PM Rating:5မင်္ဂလာပါ Android,Android OS,Tablet ကိုင်ဆောင်ကာ ဖုန်းဖြင့် ကာရာအိုကေသီချင်းဆိုပြီး အသံတွေပါ ဖမ်းယူချင်တဲ့သူတွေအတွက် Sing! by Smule Apk 20...
ဖုန်းမှာ ဗီဒီအိုတွေကိုအလန်းဇယား effect တွေနဲ့ အမိုက်စား ဗွီဒီယိုစာတန်းထိုး Slideshow ပြုလုပ်နိုင်မယ့် - PowerDirector Video Editor App
Android/Tablet ဖုန်းတွေမှာPowerDirector Video Editor App v4.10.6 အသုံးပြုလိုသူများအတွက် ၂လပိုင်း ၂၇ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထွက် Updateအသစ်လေ...
ဖုန်းမှာ ဗီဒီအိုတွေကိုအလန်းဇယား effect တွေနဲ့ အမိုက်စား ဗွီဒီယိုစာတန်းထိုး Slideshow ပြုလုပ်နိုင်မယ့် - PowerDirector Video Editor App Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 5:25 PM Rating:5Android/Tablet ဖုန်းတွေမှာPowerDirector Video Editor App v4.10.6 အသုံးပြုလိုသူများအတွက် ၂လပိုင်း ၂၇ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထွက် Updateအသစ်လေ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 5:25 PM No comments:
နောက်ဆုံးဗားရှင်းအသစ် ထက်မံထွက်လာတဲ့ - PicsArt Photo Studio: Collage Maker & Pic Editor Apk [Latest]
PicsArt Photo Studio & Collage 9.30.5 Premium APK ကတော့ လက်ရှိမှာအသုံးပြုသူပေါင်း သန်း 300 ကျော်ရှိထားတဲ့ All-In-One Photo Edi...
နောက်ဆုံးဗားရှင်းအသစ် ထက်မံထွက်လာတဲ့ - PicsArt Photo Studio: Collage Maker & Pic Editor Apk [Latest] Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 9:01 PM Rating:5PicsArt Photo Studio & Collage 9.30.5 Premium APK ကတော့ လက်ရှိမှာအသုံးပြုသူပေါင်း သန်း 300 ကျော်ရှိထားတဲ့ All-In-One Photo Edi...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 9:01 PM No comments:
နောက်ဆုံးဗားရှင်းအသစ် ထပ်မံထွက်ရှိလာတဲ့ - Messenger Lite v26.0.0.7.188|7.4Mb
မင်္ဂလာပါ...ဖေ့စ်ဘုတ်သုံးတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက် 2018-02-26 နေ့မှာ နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ Messenger Lite ဆော့ဖ်ဝဲလ်လေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။အောက...
နောက်ဆုံးဗားရှင်းအသစ် ထပ်မံထွက်ရှိလာတဲ့ - Messenger Lite v26.0.0.7.188|7.4Mb Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 8:38 PM Rating:5မင်္ဂလာပါ...ဖေ့စ်ဘုတ်သုံးတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက် 2018-02-26 နေ့မှာ နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ Messenger Lite ဆော့ဖ်ဝဲလ်လေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။အောက...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 8:38 PM No comments:
အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများအကြောင်းပါဝင်သည့် မြန်မာရှေးဦးသူနာပြု ဆော့ဖ်ဝဲလ်
မြန်မာဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသောအခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများအကြောင်းပါဝင်သည့် Applicationလေးပါ အရေးပေါ် အသက်ကယ်နည်းများအပြင်#အရေးပေ...
အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများအကြောင်းပါဝင်သည့် မြန်မာရှေးဦးသူနာပြု ဆော့ဖ်ဝဲလ် Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 6:00 PM Rating:5မြန်မာဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသောအခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများအကြောင်းပါဝင်သည့် Applicationလေးပါ အရေးပေါ် အသက်ကယ်နည်းများအပြင်#အရေးပေ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 6:00 PM No comments: